Saxanka Shiinaha ee dubista & weelasha lagu buufiyo oo leh shahaadada CE Warshadda iyo Soosaarayaasha | Dubo
Muffin / Cake Tray
Qalabka Birta Aan Xudduudda Lahayn
rootida / warshadaha rootida dubista
Digsi rooti / weelka rootida wershadaha
Sandwich Aluminum rootiga rooti Toast Tin
Saxanka miiska dubista & digsiyada oo wata shahaadada CE
Faahfaahin deg deg ah
Dufanka dubitaanka & Digsiyada
Noocyada Dufanista & Noocyada:
dubista digsiga Pizza
0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2mm
Silicone Glaze, Hard Silicone
Sanduuqa Carton & Wooden Box
20ka maalmood kadib markaad hesho lacagta bixinnada
saxanka dubista & digsiyada
Beeraha wax soo saarkooda waxay ka samaysan yihiin saxan dubista iyo digsiyada. Dhammaan saxannada dubista & doolshadu waxay ka kooban yihiin qalab fasal ganacsi ah, oo lagu sharraxay heerar kala duwan iyo qaabaynno lagu daboolayo baahiyahaaga dubitaanka, oo waxay kuxiran yihiin faahfaahintaada.
Faahfaahinta cabirka loogu talagalay tixraaca: saxanka dubista & digsiyada
Nambarka Alaabada Faahfaahin
MY14222 Muffin Tray-35Cup 600 × 400 × 33 Alusteel 0.6 / 0.8 Silicone Glaze
MY13442 Mini Cake Tray Banana-24Cup 600 × 400 × 25 Alusteel 0.6 / 0.8 Silicone Glaze
MY13362 Fake Cake Mold-27Cup 600 × 400 × 23 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
DZ502 Jiid-40Cup 600 × 400 × 27 Alusteel 0.6 / 1.2 Silicone Glaze
MY12302 Mini Cake Tray Bear-21Cup 600 × 400 × 26 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12312 Mini Cake Tray Bear-36Cup 600 × 400 × 26 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12332 Mini Cake Tray Panda-25Cup 600 × 400 × 35 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone adag
MY12441 Mini Cake Tray Apple-24Cup 600 × 400 × 40 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone adag
MY12362 Dubo-Cake Tray Duck-20Cup 600 × 400 × 32 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone adag
MY14232 Mini Cake Tray (Rectangular) -30Cup 600 × 400 × 20 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12372 24 koob Tray 600 × 400 × 30 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
Qalabka: ee saxanka dubista & digsiyada
2. Aluminium bir ah
3. Birta aan birta lahayn
4. Kaarboon bir ah
Qalabka Cufnaanta: 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, iwm.
Daaweynta dusha sare: ma-daahan, dahaadhka teflon-non-stick, silikoon glaze, rinjiyeynta kuleylka, iwm.
Waxyaabo kala duwan oo leh tayo kala duwan iyo qiimo kala duwan, howlo kala duwan oo leh qalab qalab kaladuwan (kharashka caaryada / sameynta dhimashadda). Waxaan u isticmaalnaa qalabka la soo dejiyo si aan u buuxino shuruudaha tayada sare oo noqon kara nolol waara.
Taariikhda QC: saxanka dubista & digsiyada
Waxaan u maleynaynaa inay tayadu tahay nolosheena shirkadeena. Waxaan leenahay shaybaar noo gaar ah, iyo erayga QC. Waxaan haysannaa qalab casri ah oo kormeerayaasha ah. Waxaan u sameyn doonaa kormeer nooc kasta oo agab ah ceyriinka, dhumucda, feejignaanta, Hantida adsorption hantida, iwm. A iyo waxaan ka baari doonnaa badeecada hab kasta, nooc kasta oo alaabteena ugu dambeysa, alaabada oo dhan waa inay noqotaa mid buuxisa codsiyada macaamiisha ama heerka caalamiga ah. Intaa waxaa sii dheer, SGS, BV iyo wixii kale ee kormeer ah ee hay'ad saddexaad oo kormeer ah waa la heli doonaa waana la aqbali doonaa. Fadlan ha ka welwelin tayadeena, tayadeena waa nolosheena. Waxaan tixgalin doonaa kalsoonida macaamiisha.
Alaabada kale ee laxiriirta
1. hamburger bun pan / hamburger roog roog ah
2. digsiga eyga kulul / rooga eey kulul
3. digsiga rootiga / rootida rootiga
4. caaryada jiiska
5. Gawaarida rootida lagu ciyaaro
6. digirta sisinta
7. ku samee kumbuyuutar badan
8. dubista saxan-silicone
9. muffin (koob cabitaan) saxaarad
10. baguette saxan
11. digsi digsi
12. Pizza digsiga
13. Aluminium aluminium / alusteel sheet pan
14. digsi dabool leh
Baakadaha & Maraakiibta
Faahfaahinta xirmada: baakada alwaax & sanduuqa kartoonada
Faahfaahinta gaarsiinta: 20 maalmood ka dib marka la helo lacag-bixinta
Waxaan nahay warshada xirfadleyda sameysa ee samaynta saxanka dubista iyo digsiga dubista. Iibkayada iyo farsamayaasheena ayaa loo habeeyay inay ku siiyaan adeegga xiddigga dahabka iyo alaabada ugu tayada wanaagsan. Waad noo soo diri kartaa qabyada nashqadeynta iyo sidoo kale muunad, waxaan ka dhigi doonnaa inuu noqdo badeecad dhab ah oo aad u baahan tahay.
Si diirran ayaa laygu soo dhoweynayaa inaad soo booqatid warshadeena oo aad qaawiso tayadeena, oo aad wareysi fool ka fool ah nala yeelatid.
Warshadda Wuxi Bakeware Fighter waa soo saare hormuud ah isla markaana keenaysa alaabada rootida tayada leh, oo la aasaasay bishii Maarso 2003. Waxaan shaqeynaa 14000 m 2 aqoon isweydaarsi, tas-hiilaad aad u fiican, geedi socod soo saar horumarsan iyo koox aad u fiican oo R&D ah. Warshaddeenna hadda waxay soo saartaa ku dhawaad ​​1000 nooc oo keeg ah, oo si joogto ah u cusbooneysiisa naqshadaha wax soo saarka iyo soo saarista mustaqbalka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee soo-saareynta waxaa ka mid ah saxannada dubista, digsiga rooti, ​​digsiga Pizza, caaryada rooti, ​​buskudyo, hilqado, iwm. Waxaan ku faanaa sumadda noo gaar ah "Qulqulka", oo la asaasay isla sannaddii aasaaska shirkaddayada. Iyadoo leh tayo heer sare ah iyo gaarsiin waqtigeedii, Warshadda Wuxi Bakeware waxay abuurtay muuqaal sumcad iyo isku hallayn karo dhoofinta, taasoo noqoneysa fure muhiim u ah iibkeenna Iibka suuqa maxalliga ah ee shirkadda ayaa horeyba u faafiyey Shiinaha oo dhan, iyada oo ganacsigayaga caalamiga ahi uu si dhakhso leh u sii fidayo. Waxaan sidoo kale aqoonsannahay muhimadda kalsoonida macaamiisha waxaanan ku dhiirigelineynaa dhammaan shaqaalaha inay u adeegaan macaamiisha sida ugu wanaagsan ee ay kartidooda u leeyihiin. Ugu dambeyntii waxaan higsaneynaa inaan ku sii wadno isku-halaynta xirfadleyda dhammaan alaabooyinka iyo adeegyadeena aadka u wanaagsan.
1. Warshaddeenu waxay dejisaa goor hore waxayna leedahay dhaqan hodan ah.
2. Waxaan khibrad fiican u leenahay dhoofinta.
3. Waxaan haysannaa koox xoogan oo loogu talagalay qaabeynta wax soo saarka iyo horumarka.
4. Waxaan haysannaa qalab wax soo saar oo horumarsan oo ka yimid Jabaan iyo Mareykan.
5. Waxyaabaha dahaarka ah ee weelka wax lagu dubto waa teflon.
Shirkaddeenu waxay ka qayb qaadatay dhowr bandhig, sida Canton Fair (Guangzhou), Bakery China (Shanghai), IBA (Jarmalka), GULFOOD MANUFACTURING (Dubai), IBIE (USA), FHA (Singapore), iwm.
Macaamiil la aamini karo & Wada Shaqe adduunka oo dhan
Q1: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
A1: Haa, waxaan nahay warshad, WUXI BAKEWARE CO., LTD. Waxay ku taalaa Degmada Binhu, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.
Q2: Waa maxay maadada alaabtaadu?
A2: Alaabta aluminium-aluminium, alusteel, bir daxaleysan, iwm, dhoofinta ka timid Japan, Yurub, iwm.
Q3. Miyaan astayn karaa cabirka 'soo-saarka'? Intee in le'egna waa badeecaddayda la habeeyay?
A3: Haa, waad awoodaa. Waxaad u soo bandhigi kartaa shuruudahaaga faahfaahsan warshaddeenna si ay u samayso wax soo saarkaaga. Iyo qiimaha FOB ee la bixiyay waa tixraac kaliya, qiimaha caadada gaarka ah fadlan la tasho.
Q4: Sheygu ma aaminbaa inuu cuntada toos ula xiriiro?
A4: Waa hubaal. Badeecadeenu waxay la kulmi karaan FDA, heerka SGS.
Q5: Sideen ku heli karnaa muunado?
A5: Warshaddeenna waxaa sharaf u ah inay ku siiyaan tusaalayaal adiga kuu gaar ah si aad u hubiso tayada. Ha tayadayada badeecadayadu runta ha kuu sheegto.
Q6: Sidee ayay warshaddaadu u xakameysaa tayada?
A6: Tayada ayaa ah shay hore oo aan tixgalineyno, waxaan had iyo jeer tixgelin siineynaa tayada badeecad kasta. Geedi socodka wax soo saarka oo dhan ayaa hoos imanaya kontoroolka tayada adag. Dhammaan alaabooyinkeennuna waxay ka gudbeen heerka caalamiga ah.
Cinwaanka: Magaalada Taihu, Degmada Binhu, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
Fakis: + 86-510-85071328 QQ: 3271668146
Whatsapp: + 86-150 5229 6593 Moobiil: + 86-150 5229 6593
Websaydh: http://www.flowerybakeware.com; www.bake99.com/
Hore: Xirfadle 60x 80cm saxanno dubista leh shahaadada CE
Xiga: Ku calaamadee weel muraayad cusub leh tayo sare leh
XIDIGAHA LA XIRIIRAAN
Brand aluminium baguette cusub oo lagu dubay saxan leh hi ...
Dufan fara badan oo macaashka dubitaanka
Caano badan oo duban oo duban dub u samaysan oo caaryada w ...
Qaabka koobka dubista miyuusigga ah oo dhan ...
Iib iibinta kulul oo rooti la dubay oo qiimo jaban leh
Fariin caag ah oo kushiinka dubista ah ...
Cinwaanka: Tuulada Liangnan, Magaalada Taihu, Degmada Binhu, Wuxi, Jiangsu, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Aad Leedahay.